Dooni ku degtay Xeebaha Jubbaland iyo dad nolosha lagu la,yahay – news
Dooni ku degtay Xeebaha Jubbaland iyo dad nolosha lagu la,yahay
Guddoomiyaha ayaa sheegay in dadka Doonida saarnaa ay tiro ahaan gaarayeen 17 ruux, balse hadda la hayo 13 Mayd ah, kuwaa oo ay Badda soo tuftay, halka inta kale weli muddo saddex maalin la la,yahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dooni ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa la sheegayaa in ay ku degtay inta u dhaxeysa Badhaadhe iyo Raas-kambooni ee Gobolka Jubbada Hoose.
Guddomiyaha Degmada Badhaadhe ee Gobolka Jubbada Hoose Yuusuf Maxamed Ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Dooni ku degtay inta u dhaxeyso Badhaadhe iyo Raas-kambooni, islamarkaana ay jiraan dad weli raq iyo ruux la la'yahay, kuwaas oo Doonta saarnaa.
Wuxuu intaas ku daray in jiraan dad kale oo kaluumeysata ahaa oo sidaan oo kale Badda lagu la,yahay, isagoona shaaca ka qaaday in xilliyadaan ay adagtahay in Badda la galo, oo ay jiraan dabeylo xooggan, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka kaluumeysatada ah ee Badda ka soo jilaabto.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in gurmad loo sameeyo dadkii dhibaatada soo gaartay, waxaa uuna hoosta ka xariiqay in dadka ku nool deegaanada Jubbada hoose ay ka fogaadaan Xeebaha Jubbaland xilliyadan adag.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore ka digtay in Waqooyiga iyo Koonfurta soomaliya ay todobaadyadaan ka da'i karaan roobab dabeylo wato, kuwaas oo waxyeelo u geysto dadka ku noolo Xeebaha iyo agagaarka Webiga oo laga yaabo in uu fatahaad sameeyo.
RW Roobale: Wax baan ka qabanayaa Tacaddiyada Haweenka
Warar 27 September 2020 17:11
Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in shaqada Koowaad ee uu qabanayo iney tahay wax ka qabashada tacaddiyada haweenka iyo caruurta.